पुस २०, २०७४ शुक्रवार ००:५३:०० प्रकाशित
नर्सिङ आफैंमा एउटा गरिमामय पेशा हो। बिरामीको सेवादेखि लिएर समुदायमा गएर नेतृत्ववहन गरी सम्पूर्ण क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने क्षमता हामीमा छ।
नर्सिङ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति अनि माथिल्लो तहमा अध्ययन गरेका जनशक्ति थपिँदो क्रममा छन्। यो आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो। हिजो 'रातबिरात काम गर्ने नर्सहरु' भन्दै यो पेशाप्रति नाक खुम्च्याउनेहरु अहिले आफ्ना छोरीलाई नर्स बन्न प्रेरित गरिरहेका छन्। अझ 'छोराको बिहे गर्न नर्स पाए हुन्थ्यो' भन्नेहरु पनि प्रसस्त भेटिन्छन्।
तर, हामीभित्रकै समस्या र हामीमा भएको अहंले हाम्रो पेशागत मर्यादालाई धुमिल पार्न खोजिरहेका छन्। नर्सका हकहितका विषयमा एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा हामीमा त्यो एकता देखिएको छैन।
अहिले मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट बिनाकारण नर्सलाई निकालिएको र नर्समाथि अन्याय भएको समाचार आएको छ। यो एक जनाको मात्र समस्या त होइन। यस्ता सयौं नर्स दिदीबहिनी अस्पतालका हाकिम नर्स वा इन्चार्जबाट पीडित भएका छन्। प्रत्यारोपण केन्द्रका नर्सहरुले हिम्मत गरेर आवाज निकाल्नु भयो यो सकारात्मक कुरा छ। आखिर अन्याय गर्नु जत्तिकै पाप मानिन्छ अन्याय सहनुलाई पनि।
आफूलाई मन परेकालाई बिदा मिलाइदिनेदेखि लिएर सबै सहयोग गर्ने अनि मन नपरेकामाथि अत्याचार गर्ने कुसंस्कार धेरैजसो अस्पतालका नर्सिङ प्रमुखमा हाबी छ।
त्यसमाथि हामीमा के कुराको कमजोरी छ भने, आफूलाई समस्या पर्दा मात्र ठूलो ठान्छौं र बोल्छौं वा बोलिदिउन् भन्छौं। साथीलाई वा अरुलाई समस्या पर्दा बोल्यो भने नर्सिङ प्रमुखले वा प्रशासनले काम गर्न गाह्रो पार्लान् भनेर डराउँछौं। अन्याय विरुद्ध सधैं बोले पो अन्याय गर्ने र दुःख दिनेहरु डराउँछन् त, अन्यायमा परेकाहरु नै डराएपछि त कहिल्यै न्याय पाइँदैन। हामी जति डराउँछौं हामीमाथि अन्याय गर्नेहरुको आत्मबल उत्तिकै बढ्छ र झन् अन्याय थपिन्छ।
अधिकांश नर्सिङ प्रमुख नर्सहरुमा विरोधाभास पाइन्छ। उनीहरु बाहिर बोल्नुपर्दा नर्सिङको गुणस्तर र अधिकारका विषयमा बढेबढे कुरा छाँट्छन् तर आफू मातहतका नर्सहरुलाई नोकरसमान ठान्छन्। प्रणाली र पद्दतिबाट चलाउने भन्दा पनि आफूले शासन गर्न खोज्छन्। नर्सिङ व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यापन नर्सिङको सबै तहमा हुन्छ तर विडम्वना यो छ कि, हाम्रा धेरै नर्सिङ प्रमुखलाई स्टाफ व्यवस्थापनको ज्ञान छैन, भए नै पनि त्यसलाई लागू गर्दैनन्।
आफूले सम्पूर्ण कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्न सकिन्न भने नर्सिङ प्रमुखजस्तो व्यवस्थापकको कार्यभार किन सम्हाल्ने? तपाईंहरुले दिएको यातना र तनावले कति नर्सहरु डिप्रेसनमा पुगेका होलान् कल्पना गर्नु भएको छ? कुशल व्यवस्थापनको ज्ञानबिना नर्सिङ प्रमुख बन्नेहरुबाट धेरै नर्स सताइएका छन्।
यसो भन्दै गर्दा कुशल ढंगले नर्सिङ विभाग सम्हालिरहेका नर्सिङ प्रमुखहरु दुःखी नहुनु होला। यो तिनीहरुप्रति लक्षित हो, जो व्यवस्थापकीय ज्ञानबिना नर्सिङ प्रमुखको पद ओगटेर बसेका छन् र कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिरहेका छन्। त्यस्ता पक्षपाती नर्सिङ प्रमुखहरुबाट धेरै नर्सले पीडा भोग्नुपरेको छ।
नर्सिङ प्रमुखले त आफू मातहतका सबै नर्सलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने हो। समान सेवा-सुविधाका लागि पहल गर्ने हो। नर्सिङ सेवामा आउने समस्याहरुको कुशलतापूर्वक समाधान गर्नुपर्ने हो। यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेको नर्सिङ प्रमुख व्यवस्थापनसँग घाँटी जोडेर नर्सहरुविरुद्ध नै उभिनु आफूले प्रण गरेर थालेको नर्सिङ पेशाप्रतिकै बेइमानी होइन र? आफू मातहत रहेका नर्सहरुमाथि भएको अन्यायविरुद्ध लड्नुपर्नेमा आफैं अन्याय गर्नेको लहरमा उभिँदा तपाईंलाई लाज लाग्नुपर्ने होइन र?
मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा आफूमाथि भएको अन्यायको विषयमा केही नर्सले हिम्मतका साथ बोल्नु भएको छ। उहाँहरुको व्यथा सुन्दा नर्सले कतिसम्म हेपिएर र दबिएर काम गर्नुपरेको छ भन्ने छर्लंग हुन्छ। हामी आत्मसम्मानका साथ काम गर्न चाहन्छौं। बिरामीको रेखदेख गर्ने नर्समाथि शोषण र अन्याय थोपरेर उनीहरुलाई मानसिक दबाब दिने हो भने उनीहरुबाट कस्तो सेवा र कामको अपेक्षा गर्ने त?
अब सबै नर्सिङ संघसंस्था र नर्सहरुले उहाँहरुलाई साथ दिनुपर्छ, ताकि फेरिफेरि नर्सहरुमाथि यस्ता ज्यादति र दबाब नपरोस्। नर्सहरुले निर्धक्क र सुरक्षित वातावरणमा बिरामीको सेवा गर्न पाउन्।
हुनत जित सधैं सत्यकै हुन्छ, यस लडाइँमा पनि सत्यकै जित हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ अघि बढ्यौं भने त्यो नर्सिङ पेशाको जित हुनेछ। जय नर्सिङ।